Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda Shiinaha ee E-Commerce Giant si ay u samayso Diyaarad Cusub
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • News • Dadka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Aasaasaha JD.com Richard Li
Diyaarinta diyaarad cusub oo xamuul ayaa imaanaysa iyadoo JD.com oo ah shirkadda wax ka iibsanaysa internetka ee Alibaba Group Holding LTd ay ballaarineyso maraakiibteeda. YTO Cargo Airlines, oo ay leedahay YTO Express oo ay taageerto Alibaba, ayaa soo bandhigaysa gawaarida xamuulka ah oo laga beddelay 767 iyo 777 diyaaradood.
Diyaarad cusub oo xamuul ayaa xarunteedu noqon doontaa gobolka Jiangsu ee bariga Shiinaha.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines waxay heshay oggolaansho sharci oo hordhac ah si ay u bilowdo side cusub.
Diyaaradda ayaa qorshaynaysa inay adeegsato diyaaradaheeda Boeing 737-800.
The Maamulka Duulista Rayidka ee Shiinaha (CAAC) ku dhawaaqay in Maamulka Ganacsiga Suqian Jindong Zhanrui, oo ay gacanta ku hayaan JD.com Aasaasaha Richard Liu, ayaa la siiyay oggolaansho ah in la sameeyo diyaarad xamuul oo cusub oo fadhigeedu yahay gobolka bariga Jiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines, oo leh caasimad diiwaangashan oo ah 600 milyan yuan ($ 92.83 milyan), ayaa heshay oggolaansho sharci oo horudhac ah si ay u bilowdo shirkad cusub, sida uu ku sheegay ogeysiiska duuliyaha Shiinaha.
Shirkad uu maamulo aasaasaha shirkadda weyn ee e-commerce ee JD.com Inc. ayaa ku biirin doonta 75% raasamaalka aasaasiga ah halka Kooxda Airport-ka ee Nantong, oo ah magaalo ku taal Jiangsu, ay bixin doonto inta kale, sida ay sheegtay CAAC.
Sida ku cad qoraalka CAAC, diyaarad cusub ayaa qorshaynaysa inay u adeegsato diyaaradaheeda Boeing 737-800.
Boeing, oo ku dhibtoonaysay Shiinaha iibinta diyaaradaha rakaabka, ayaa xukuma suuqa xamuulka ee adduunka.
Heerarka xamuulka hawada ayaa cirka isku shareeray, taas oo qayb ka ah fiditaanka faafa ee faafa ee internetka.